IPhone Yangu Haizobhadharise! Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Kubhadharisa
wifi yangu nei isinga batike
zvinorevei kuruboshwe ruoko runorevei
bhatani repamba pane ipad mini
iphone 6 plus screen wont respond
itsva iphone setup hapana sevhisi
Kana iyo iPhone isingabhadharise, chinhu chikuru. Ini ndaimbove mushandi weApple, uye panguva yangu muApple Chitoro, kugadzirisa matambudziko ekuchaja iPhone yaive chikamu chikuru chebasa rangu rezuva nezuva. Nhau dzakanaka ndedzekuti ruzhinji rwe iPhone matambudziko ekuchaja anogona kugadziriswa pamba . Muchikamu chino, ndichakuratidza kugadzirisa sei iPhone iyo isingabhadharise , mbichana mbichana.
Tarisa Yako Mheni Cable Yekukuvara
Edza Iyo Yakasiyana iPhone Chaja
Shamba Iyo Gunk Kunze Kweyako iPhone's Yekuchaja Port
Isa yako iPhone Mune DFU Mode Uye Dzosera
Gadzira Yako iPhone
Ziva Izvi Usati Watanga
Mumwe wemibvunzo yakajairika Apple techs inogamuchira kana iyo iPhone isingabhadharise ndeiyi: 'Kana yangu iPhone isingabhadharise, ndinoda bhatiri nyowani?'
Kunyangwe zvaunoverenga pane mazhinji mawebhusaiti, mhinduro kumubvunzo uyu ndeiyi kwete! Pane zvakawanda zvisiri izvo kunze uko, uye ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zvandaida kunyora chinyorwa ichi.
iphone wont let me facetime
Seyaimbove Apple tech ine ruzivo rwekushanda nemazana emaPhones ayo asingabhadharise, ndinogona kukuudza izvozvo kutsiva bhatiri ndicho chinhu chisina kunaka zvachose .
Chokwadi ndechekuti kazhinji yenguva, ndeyako iPhone software - kwete Hardware - izvo zviri kudzivirira yako iPhone kubva kuchaja. Kana yako iPhone isingabhadharise, 99% yenguva, kutsiva bhatiri ichave nayo zero mhedzisiro!
Uye, kana aripo ndizvo dambudziko rehardware, zvinonyanya kuitika kuti nyaya iri nechaji yekuchaja pachayo - asi isu hatisati tiripo.
Kana iwe uchida kutarisa pane kuverenga, vhidhiyo yedu yeYouTube inokufambisa kuburikidza nekugadzirisa.
Maitiro Ekugadzirisa An iPhone Iyo Isingabhadharise
1. Zvakaoma Reset Yako iPhone
Dzimwe nguva mhinduro iri nyore sezvo zvakaoma resetting iPhone wako. Ndicho chinhu chekutanga chinoitwa neApple tech muApple Chitoro, uye zviri nyore kuita kumba. Heano maitiro:
Sei Kuomesa Reset Yako iPhone
Maitiro Ekuomesa Reset
iPhone 6S, 6S Uyezve, SE, uye ekare mamodheru Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi uye iyo Bhatani repamba pamwe chete kusvikira iyo logo yeApple yaonekwa pachiratidziri, wobva warega.
iPhone 7 uye 7 Plus Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi uye iyo vhoriyamu pasi bhatani pamwe chete kusvikira iyo logo yeApple yaonekwa pachiratidziri, wobva warega.
iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, uye XR Pane nhanho nhatu: 1. Kurumidza kudzvanya uye kusunungura iyo vhoriyamu kumusoro bhatani . 2. Kurumidza kudhinda uye kusunungura iyo vhoriyamu pasi bhatani . 3. Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi (inonzi 'bhatani repadivi' pa iPhone X) kudzamara Apple logo yaonekwa pachiratidziro, wobva warega.
Apple tech zano: Iko # 1 kukanganisa kunoitwa nevanhu vachiyedza kuomesa foni yavo ndeiyo havabatise mabhatani pasi kwenguva yakareba zvakakwana. Pane iPhone 8 uye X, zvakadaro, ita shuwa kuti urikudzvanya mabhatani maviri ekutanga nekukurumidza uye wakabata bhatani remagetsi pasi kwenguva yakareba. Dzimwe nguva maitiro acho anogona kutora masekondi makumi maviri kana kudarika!
mabasa mumiami yeVenzuelans
Kana izvo zvikasashanda, usanetseka! Tichazonyura mukati mekugadzirisa kwehardware mune inotevera nhanho.
2. Tarisa Yako Mheni Tambo Yekukuvara
Tora zvakanyanya padhuze neese maviri mativi eiyo USB tambo yaunoshandisa kubhadharisa yako iPhone. Apple's mheni tambo dzinokombamira kubaya, kunyanya pamagumo inobatanidza kune yako iPhone. Kana iwe ukaona anoonekwa zviratidzo zvekupfeka, inogona kunge iri nguva yeiyo tambo nyowani.
Ndingaudza sei kuti yangu tambo yemheni ndiyo chikonzero nei yangu iPhone isingabhadharise?
Kana pasina kukuvara kunoonekwa kwekunze kwetambo, edza kubaya yako iPhone mu USB chiteshi pakombuta yako kuchaja panzvimbo pekushandisa iyo yemagetsi adapter yakauya neako iPhone. Kana iwe uchitojaja yako iPhone uchishandisa komputa yako, edza kushandisa iyo yemadziro adapter. Kana ichishanda munzvimbo imwechete uye kwete imwe, tambo yako haisiyo nyaya.
Izvi zvingaite sezviri pachena, asi dzimwe nguva nzira yakanakisa yekuona kana iwe uine 'yakaipa tambo' ndeye edza kuchaja yako iPhone uchishandisa shamwari tambo . Kana yako iPhone ikangoerekana yadzokera kuhupenyu mushure mekuiisa mukati, waona chikonzero nei yako iPhone isingazobhadharise - tambo isina kukwana.
Usakanganwa nezve yako iPhone garandi!
Kana yako iPhone ichiri pasi pewarandi, iyo tambo ye USB (uye zvese zvimwe zviri mubhokisi re iPhone) yakavharwa! Apple inotsiva tambo yemheni yemahara, chero bedzi iri muchimiro chakanaka.
Iwe unogona kuseta kudzoka pawebhusaiti yeApple yekutsigira kana kufonera Apple Store yako yemuno kuti uite musangano neGenius Bar. Kana iwe ukafunga kuenda kuApple Chitoro, inogara iri pfungwa yakanaka kuve nemusangano kuGenius Bar usati wapinda. Nenzira iyoyo, haufanire kumirira mumutsara - zvirinani kwete kwenguva refu.
Tambo dzechitatu-bato dzinogona kubhadharisa matambudziko ekuchaja iPhone
Chimwe chezvikonzero zvakajairika nei iyo iPhone isingabhadharise inouya kubva kune yakaderera-mhando 3rd-bato iPhone teraja tambo idzo vanhu vanotenga munzvimbo dzemagetsi. Ehe, tambo dzeApple dzinodhura, asi mune ruzivo rwangu, iwo madhora mashanu emadhora haagone kusimuka sechinhu chaicho. Ikoko vari zvakanaka kunze uko - iwe unofanirwa kungoziva kuti ndeapi aunosarudza.
Yakakwira mhando, tambo dzisingadhuri ita kuvapo!
Kana iwe uchitsvaga a yepamusoro-soro kutsiva iPhone kuchaja tambo izvo zvinogara kwenguva refu kupfuura Apple, tarisa edu anodikanwa paAmazon. Idzi hadzisi tambo dzakachipa dzechiteshi chegasi dzichadambuka muvhiki. Ndinoda tambo yemheni ine 6-tsoka nekuti yakareba zvakakwana kuti ndikwanise kushandisa yangu iPhone mumubhedha.
3. Edzai Yakasiyana iPhone Chaja
Iwe unobhadharisa yako iPhone nekuiisa iyo kumadziro, uchishandisa charger yemota, mune speaker dock, mune yako laptop, kana imwe nzira? Pane zvakawanda dzenzira dzakasiyana dzekuchaja iPhone.
yangu foni skrini haina basa
Rangarira kuti ndeyako iPhone software inoti 'Hongu' kana 'Kwete' kubhadharisa kana yako iPhone ichibatana kune zvekushandisa. Kana iyo software ikaona kuchinja kwesimba, zvinodzivirira yako iPhone kubva kuchaja senzira yekudzivirira.
Ndingaziva sei kuti charger yangu ndicho chikonzero nei yangu iPhone isingabhadharise?
Tichaita zvakafanana zvatakaita patakaongorora tambo yeMheni. Nzira yakapusa yekuziva kana chaja yako yakaipa kuedza imwe. Ita shuwa kuti iwe unoyedza kanopfuura kamwe nekuti majaja anogona kunge ari mashoma kwazvo.
Kana yako iPhone ikasabhadharisa neadapter adapter, edza kuiisa mu USB port pakombuta yako. Kana ikasabhadharisa mukombuta, edza kuiisa mumadziro - kana kuyedza chakasiyana USB chiteshi pakombuta. Kana yako iPhone ichiroja neimwe adapta uye kwete imwe, saka yako charger ndiro dambudziko.
Iko kune emhando yepamusoro inokurumidza majaja kunze uko, asi iwe unofanirwa kungwarira
Kana iwe uchida chaja nyowani, tarisa majaja atinokurudzira kushandisa iyo imwecheteyo yekubatanidza seiri pamusoro (kune tambo). Iyo yepamusoro Apple-inogamuchirwa amperage ye iPhone majaja ndeye 2.1 amps. Kusiyana nematareja echitatu-bato anogona kukuvadza yako iPhone, aya anozochaja yako iPhone nekukurumidza uye zvakachengeteka.
(Iyo iPad charger iri 2.1A uye Apple inoti zvakanaka kune iPhones.)
Zano: Kana iwe uchiedza kubhadharisa uchishandisa Apple keyboard kana USB hub, edza kubaya yako iPhone zvakananga mune imwe yekomputa yako USB zviteshi. Zvese zvishandiso zvakavharirwa muUSB hubs (uye keyboards) zvinogovera mashoma magetsi. Ini pachangu ndakaona iPhone yekuchaja matambudziko achiitika nekuti pakanga pasina simba rakaringana rekutenderera.
4. Bhurai Iyo Gunk Kunze kweYako iPhone's Yekuchaja Port
Shandisa tochi uye nyatso tarisa pachiteshi chekuchaja muzasi me iPhone yako. Kana iwe ukaona chero marara kana gunk imomo, zvinogona kunge zviri kudzivirira tambo yemheni kubva mukugadzira kubatana kwakasimba kune yako iPhone. Kune zvakawanda zvekubatanidza pazasi uko (tambo yemheni ine 9), uye kana isiriyo yakavharwa, yako iPhone haizobhadharisa zvachose.
Kana iwe ukawana lint, gunk, kana zvimwe marara muchiteshi chekuchaja che iPhone yako, inguva yekuzvikwenya. Unoda chimwe chinhu chisingazoitise magetsi kana kukanganisa zvemagetsi pazasi pe iPhone yako. Heano hunyengeri:
Bata bhurasho remazino (iro rausina kumbobvira washandisa kare) uye zvinyoronyoro bvisa chiteshi chako chekuchaja che iPhone. Pandaive kuApple, isu taishandisa fancy anti-static brushes kuti tiite izvi (izvo zvaunogona kuwana kuAmazon pasina kana chinhu), asi mabhurasho emazino anoshanda futi.
Kutarisana nekukuvara kwemvura
Chimwe chezvikonzero zvakajairika nei iyo iPhone isingabhadharise kukuvara kwemvura. Kukanganiswa kwemvura kunogona kupfupisa kubatana muchaji yekuchaja ye iPhone yako kunokonzeresa matambudziko ese ne iPhone yako. Kunyangwe iwe waomesa chiteshi uye nekukwesha gunk, dzimwe nguva kukuvara kwacho kwatoitwa.
5. Isa Yako iPhone Mune DFU Mode Uye Dzosera
Kunyangwe kana yako iPhone ikasabhadharisa, iyo DFU kudzoreredza inogona kushanda! Iwe wabvisa mukana we a yakapusa software dambudziko uye ndokutarisa kune yako USB tambo, charger, uye iyo iPhone pachayo, saka ndiyo nguva yekupedzisira-dhiza yekuedza - iyo DFU kudzorera. Iyo DFU kudzorera ndeye yakasarudzika mhando yekudzorera (kana iwe dzosera yako iPhone, unodzima zvese zviri pairi nekuidzosera kumagadzirirwo efekitori) ayo anogona kugadzirisa zvakakomba software maseru - kana ivo varipo.
Tarisa uone chinyorwa changu nezve sei DFU kudzorera ane iPhone kuti udzidze kuisa yako iPhone muDFU modhi, uye uyambuke minwe yako usati waedza. Pandaishandira Apple, ichi ndicho chinhu chekutanga chandingaedze, kunyangwe foni payakaratidza kukuvara. Pane mukana mudiki wekuti DFU kudzoreredza ichaunza isiri-inoshanda iPhone kuhupenyu.
Kana ikasashanda, dzoka pano kuti udzidze nezvesarudzo huru dzekugadzirisa dzaungasaziva.
Kana iwe ukaenda kuApple Store kunogadzirisa yako iPhone uye pakave nemvura kana kukuvara kwemuviri kufoni, iyo yega sarudzo yavanogona kupa ndeye kutsiva yako yese iPhone. Kana iwe usina AppleCare +, izvi zvinogona kudhura, nekukurumidza. Dai iwe waive nemifananidzo, mavhidhiyo, kana rumwe ruzivo rwevanhu pane yako iPhone uye yako iPhone haizobhadharisa, Apple ichati ivo vaenda zvachose. Neraki, pane zvimwe zvingasarudzwa:
Imwe Kugadzirisa Sarudzo
Kana iwe uchida kugadzirisa yako iPhone nhasi, Pulse iri rakakura, rinodhura, mu-munhu basa rekugadzirisa. Ivo vachasangana newe kumba kana nzvimbo yaunosarudza mumaminetsi mashoma se60.
Puls inopa waranti yeupenyu pazvikamu uye nebasa, uye iwe unongobhadhara chete mushure mekunge vapedza kugadzirisa. Ivo zvakare vanopa sarudzo yekugadzirisa yako iPhone's kuchaja chiteshi uye zvimwe zvidiki zvidiki izvo Apple isingabatike. Pane mukana iwe uchakwanisa kudzoreredza data rako uye chengetedza mari futi!
Kuzara pachena: Tinogamuchira mari yekuendesa kana iwe ukasarudza kugadzirisa yako iPhone nePuls. Izvo zvakati, ndinotenda zvechokwadi ivo vakanakisa uye yakapusa sarudzo kune vanhu vazhinji.
iPhone kuchaja Zvakare!
Ndinovimba yako iPhone yamuka zvakare kuhupenyu uye iwe uri munzira yako kudzoka kuzere kuchaja. Ndingafarire kunzwa kubva kwauri nezvezviitiko zvako kugadzirisa dambudziko rekuchaja iPhone, uye ndiri pano kuzobatsira munzira.
dna bvunzo mutengo